कमल गिरीको काला कर्तुत छताछुल्ल, हलेसीमा हल्लीखल्ली - Tesro Ankha
कमल गिरीको काला कर्तुत छताछुल्ल, हलेसीमा हल्लीखल्ली
हलेसी (खोटाङ) । नामअनुसारको काम भइदिए संसार कति सुन्दर देखिन्थ्यो होला । नामअनुसारको काम नहुँदा समाजमा विविध विकृति र विसंगति बढ्दै गएको छ । मानिसले नामअनुसार काम नगर्दा ऊ बसोवास गर्ने समाजमा विकृति, विसंगति बढ्दै जानु अस्वाभाविक होइन ।
दुई पैसा आम्दानी गर्ने लोभमा मानिसले के–के गर्दारहेछन् भन्ने रहस्य खुलासा भएको छ । प्रसंग– हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ हलेसीनिवासी कमल गिरीको हो । नेविसंघ क्षेत्रीय सभापति गिरीले विनालगानी आम्दानी गर्न हलेसी महादेव गुफालाई धराप पार्न मलजल गरेका थिए ।
खोटाङ क्षेत्र नम्बर १ को नेविसंघ क्षेत्रीय सभापति गिरीले हलेसीमा रहेको मारातिका क्षिमेद गाग्तन छोलिङ गुम्बा पुनःनिर्माणका लागि प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका थिए । गुम्बा पुनःनिर्माण गर्ने भन्दै नवनिर्माण गर्दा कमल गिरीले लाखौं रकम कुम्ल्याएको उनका नजिकका आफन्तले सुनाए । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा गिरीका आफन्तले भने, ‘राम्रै पैसा हात पारे नि ।’
गुम्बाको पैसा हात पार्न कसरी सफल भए त ? समाचार स्रोतको भनाइ थियो, ‘गुम्बा पुनःनिर्माणका लागि साबिक महादेवस्थान गाविसबाट सिफारिस लिनुपथ्र्यो । गाविस जनप्रतिनिधिविहीन थियो । सर्वदलीय सहमतिबाट काम चलेको थियो । उनले विभिन्न प्रलोभन देखाएर सर्वदलीय बैठकबाट गुम्बा पुनःनिर्माणका लागि सिफारिस लिएरै छाडे । तात्कालिक सिडियोसँग चोचोमोचो मिलाउने पनि उनी अघिसरे । काम सजिलो थिएन । अप्ठ्यारो काम सजिलो बनाउँदा उनले गुम्बाबाट राम्रै नजराना हात पारे ।’
त्यही समयदेखि उनले पैसा खेलाउन थाले । त्यही पैसा खेलाउँदै स्कारपियो किने । जग्गा दलाली गरे । गुम्बाबाट हात पारेको पैसा खेलोफड्को गर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगे ।
‘पाप धुरीबाट कराउँछ,’ कमल गिरीका अर्को आफन्तले आलोचना गरे, ‘उनले गरेको पाप स्थानीय निर्वाचनमा देखियो ।’ कसरी ? उनले दुःखेसो पोखे, ‘गिरीलाई डाउन नगरी कमल गिरी उठ्न सक्दैनथे । आफ्नैलाई डाउन गरेर उकासिन खोज्दा उनी आफ्नैहरूबाट तिरस्कृत भए । स्थानीय निर्वाचनमा उनलाई धूलो चटाउन आफन्तलगायत काँग्रेसीजन नै लागिपरे ।’
मनिसले राम्रो काम गरे नगरेको निर्वाचनमै देखिँदोरहेछ । गुम्बाको प्रतापले यहाँसम्म आएका उनको स्कारपियो गुम्बाकै ट्राभल्सले प्रयोग गर्दै आएको छ । ट्राभल्सले गाडी प्रयोग गर्दा उनको कमाइ राम्रै हुन्छ । त्यसैले उनलाई चलाइसक्नु छैन ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ हलेसीको वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका उनी पराजित भए ।
पराजित वडाध्यक्ष गिरी ढाँटछलमा त्यत्तिकै माहिर छन् । ‘त्यतिमात्रै होइन, यताको कुरा उता, उताको कुरा यता गर्छन् । यता र उताबीच द्वन्द्व सिर्जना गराएर आफैंले मिलाउने प्रयास गर्छन् । उनी आर्थिक कारोबारमा पनि कमजोर छन् । कसैबाट सरसापट लिएपछि फिर्ता गर्न हात गह्रौं बनाउँछन् ।
समाचार पुष्टि गर्न पटक–पटक टेलिफोन गर्दा कमल गिरी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । सम्पर्कमा आउन नचाहे पनि समाचर पुष्टि गर्न एसएमएस गर्दासमेत गिरीले वास्ता गरेनन् । उनको काला कर्तुत क्रमशः प्रकाशित गरिनेछ ।
(पुस ६ गते प्रकाशित तुवाचुङ साप्ताहिकबाट ।)
२०७५ पुष ६ २०:०१